Fampielezan-kevitra: manantombo sy misongadina hatrany ny kandidà Rajoelina | NewsMada
Fampielezan-kevitra: manantombo sy misongadina hatrany ny kandidà Rajoelina
Hatraiza hatraiza… Hiatrika fifidianana isika afaka herinandro latsaka. Hamarana ny fampielezan-kevitra ataony ireo kandidà vonona ny hiroso amin’ny fifidianana. Hatreto aloha, misongadina sy manantombo amin’izany propagandy izany ny kandidà laharana faha-13.
Mahavita mitety distrika na tanàna dimy isan’andro eo ho eo ny kandidà sady mpanorina ny IEM. Vory lanona hatrany ny vahoaka, liana amin’ny vina sy ny fandaharanasany. Nisongadina izany tamin’ireo tanàn-dehibe, na ny renivohi-paritany teo aloha ary tena babo tanteraka ny mponina amin’ireny faritra ireny. Anisan’izany ny ao Antsiranana, nanombohana ny fampielezan-kevitra. Ny tany Mahajanga sy Toamasina, hatrany Fianarantsoa. Mbola hihazo ny any Toliary ny tenany, hamarana ny fampielezan-kevitra. Hialohavan’ny etsy amin’ny “Colesum” Antsonjombe izany, ny asabotsy izao , amin’ny alalan’ny faradoboka, hampisehoana ny herin’ny mpanohana sy ny mpiara-dia aminy ho an’ny eto Antananarivo sy ny manodidina.
Niainga amin’ny hetaheta sy ny olan’ny mponina…
Tsy vitan’izany anefa fa eo koa ny vina sy ny tetikasa, niainga amin’ny hetaheta sy ny olana ary koa ny fanirian’ny mponina amin’ireny faritra lalovana ireny. Anisan’izany, ny tokony hampitoviana lenta ny an-tanàn-dehibe sy ny any amin’ny faritra eo amin’ny fampandrosoana.
Anisan’ny mivoitra amin’ny fandaharanasan’ny kandidà Rajoelina amin’ireo teboka 13 ny fijerena akaiky ny sosialim-bahoaka. Eo ohatra ny fampanarahana fenitra ny EPP, ny CEG, ny Lycée amin’ny alalan’ny fampiasana ny informatika eny anivon’ireny sekoly ireny. Hojerena ny hanatsarana ny rafi-pampianarana. Eo koa ny hampidinana ny vidin-jiro amin’ny alalan’ny fananganana foibe mpamokatra herinaratra mandeha amin’ny herin’ny masoandro ka hojifain’ny mponina amin’ny vidiny ambany izany. Fampitaovana ny any atsimo hisitrahan’ny mponina ny rano madio fisotro.
Tsy hadinony ny tanora. Fanorenana kianja manara-penitra marolafy ho an’ny taranja rehetra. Ny fanofanana araka asa hiatrehan’ny tanora ny ho aviny, toy ny fambolena sy ny fiompiana ho an’ny eny ambanivohitra. Homena tany 10 ha avy izy ireo hamokarany. Ny handravana ny Antenimierandoholona ka hanganana oniversite manokana ny vola amin’io andrimpanjakana io. Ny fanorenana fotodrafitrasa ka ny hanohizana ny asa fanamboaran-dalana efa natao, fony fitondrana Tetezamita.
Fametrahana fandriampahalemana maharitra
Ankoatra izany, ny fametrahana fandriampahalemana sy filaminana maharitra any amin’ireo faritra tena isehoan’ny asan-dahalo. Eo ny hividianana helikoptera miisa 10. Ny fanomezana fitaovana avo lenta ho an’ny mpitandro filaminana, toy ny moto, na fiara afaka mijoboka anaty rano. Hatsangana ny vondron-kery manokana hiady amin’ny asan-dahalo any amin’ny faritra. Ny fanesorana avy hatrany ireo mpitandro filaminana tsy mahavita ny asany rehefa misy ny antso fanairan’ny mponina. Eo koa ny fametahana “puce” ny omby sy ny fampiasana “drone” ahafahana manaraka akaiky ny dian’omby raha lasan’ny dahalo. Mifandray amin’izany ny ady amin’ny kolikoly, eo amin’ny sehatra sy ny isan’ambaratongany.
Fanorenana tanàna vaovao sy trano amin’ny vidiny mirary…
Etsy andaniny, tafiditra amin’ny vinan’ny kandidà laharana faha-13 ny fanorenana tanàna vaovao sy ny trano amin’ny vidiny mora, haloa tsikelikely, manomboka amin’ny 2 hetsy ariary. Natokana ho an’ny mpivady, na ny tanora vao hihary izany.
Tafiditra anatin’ny tetikasany koa ny fanatsarana ny tanàna, toy ny ao Mahajana sy Toamasina mba hitovy amin’ireo tanàna lehibe mpandray mpizahatany any ivelany, toy ny any Frantsa na Etazonia… Ampahany amin’ireo tetikasan’ny mpanorina ny IEM tamin’ireo faritra sy distrika nolalovany ireo.